‘डेंगु महामारी होइन तर तत्काल उपचार गर्नुपर्छ’ Darpansansar News
‘डेंगु महामारी होइन तर तत्काल उपचार गर्नुपर्छ’
काठमाडौं । देशभर डेंगुको त्रास बढिरहँदा चिकित्सकहरुले महामारी नभएको तर समयमा उपचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
चिकित्सकहरुले रोग नियन्त्रणका लागि घरदेखि गल्लीसम्म जनचेतना र सरसफाइको अभियान चलाइएको जानकारी दिएका हुन् । कार्यक्रममा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा। विवेक लालले हालसम्म ४२ भन्दा बढी जिल्लामा यो रोगको संक्रमण देखिएको र साउन १ गतेदखि भदौ १७ गतेसम्म २५५९ जनामा डेंगु रोगबाट संक्रमित भएको तथांक प्रस्तुत गरे ।
हालसम्म प्रदेश १ मा ७५३ जना, प्रदेश २ मा २३ जना, प्रदेश ३ मा १०९३ जना, प्रदेश ४ मा ५७२ जना,प्रदेश ५ मा १०५ जना, प्रदेश ६ मा २ जना र प्रदेश ७ मा १२ जना संक्रमित रहेको उनले बताए । यो रोगबाट कास्की, मकवानपुर, सुनरी,चितवनमा बढी संक्रमण देखिएको छ ।
डेंगुबाट चार जनाको मृत्यु भइसकेको जानकारी दिंदै भने–उच्च पहाडी क्षेत्रमा समेत यसको संक्रमण देखिन थालेकोले सचेत हुनुपर्छ । अहिलेसम्म १ सय ३० मुलुकमा यो रोगको संक्रमण देखिएको जानकारी गराए ।
उनले रोग नियन्त्रणका लागि जनचेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्नुका साथै गैरसरकारी संस्था, स्थानीय निकायको अगुवाईमा नेपालभर डेंगु संक्रमणका लक्षण र बच्ने उपायका बारेमा घरघरमा जनचेतना फैलाउने काम भईरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘देशभरका स्थानीय तहमा न्यूनतम ८७ लाख र अधिकतम ८९ लाख बजेट छुट्याएको र हालसम्म ८५ वटा स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिएको छ’, उनले भने, यो रोगबाट गत वर्ष ३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।’
विरामीहरुमा डेंगु संक्रमणको कारण मात्र नभई स्क्रबटाइफस, कलेजोको रोग, उच्च रक्तचाप, मृगौलाको संक्रमण जस्ता कारणहरुबाट पनि विरामीको मृत्यु हुने गरेको उनले बताए ।
लामखुट्टे एकसय जनालाई टोकेमा १० जनालाई डेंगु संक्रमण हुने र संक्रमण भएकाहरुमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने,आखाँको गेडी दुख्ने जानकारी गराए ।
बढी संक्रमण भएकाहरुमा रक्तश्राव हुने, हड्डी भाचिए जस्तो दुखाई हुने,बान्ता हुने, खान मन नलाग्ने शरीर शिथिल हुँदै जाने जस्ता लक्षणहरु देखिने जानकारी दिए ।
शुक्रक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा।बासुदेव पाण्डेले हरेक दुई दुई वर्षको अन्तरालमा डेंगु संक्रमणको रिसर्च हुने गरेको र हरेक तीन वर्षमा यो रोगको प्रकोप देखिने गरेको बताए ।
उनले भने–डेंगु संक्रमण ६ देखि ७ हजार फिटसम्मको उचाइसम्म पुगिसकेको छ । तर, अहिलेको डेंगु संक्रमण गम्भीर खालको नभएको जानकारी दिए । यो रोग लामखुुट्टेले संक्रमितलाई टोकेर अर्को व्यक्तिलाई टोकेमा सर्ने बताए। उनले आफू कार्यरत रहेको अस्पतालमा भदौ १९ गते २५० जनालाई उपचार गरेकोमा ११७ जनामा डेंगु संक्रमण देखिएको जानकारी समेत गराए ।
विरामीहरुको चाप बढेसँगै अस्पतालको बेडले अपुग भएको कारण बेड थप्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग प्रस्ताव राखेको र हाल २५ हजार विरामीको उपचार भइरहेको उनले बताए ।
विरामीहरुमा अन्य संक्रमण भएको कारण सबै विरामी डेंगु संक्रमणबाट मृत्यु भएका होइनन् भन्ने उनको भनाई रहेको छ । उनले भने–डेंगु संक्रमण क्लासिकल र सेविसियल लामखुट्टेको टोकाइबाट मात्र डेंगु संक्रमण हुन्छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा पुर्व प्रमुख डा।बाबुराम मरासनीले पानीको खाल्डाखुल्डी भएको ठाउँ, टायर भएको ठाउँमा यसको बढी संक्रमण हुने उनले बताए । यसका लागि संगठनिक संरचना कमजोर भएको, जलवायु परिवर्तन यसका मुख्य कारण बताए ।
लामखुट्टेको अध्ययन गर्दा यो २० वर्ष भन्दा पहिले भित्रिएको उनले बताए । त्यसभन्दा पछाडी नभएको र यसबाट बच्नका लागि लामखुट्टेको सर्भे गर्ने सांगठनिक संरचना बलियो बनाउँदै जाने, लामखुट्टेले मार्ने काम कुन निकायको हो निर्धारण गर्ने, देशमा लामखुट्टेको रिसर्च गरेर नियन्त्रण उपाय पत्ता लगाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने–सबैभन्दा बढी संक्रमण हुनमा टायर कम्पनी तथा टायर राख्ने ठाउँ, स्कुल, कलेज, स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतले चर्पीको गलत तरिकाले प्रयोग गरेको कारण हुन्छ ।
डेंगु संक्रमण रोकथामका लागि नगरपालिकाले आदेश दिएर सरकारी अड्डा, स्कुल कलेजमा सफा गर्न लगाउने र सबै क्षेत्रबाट सरसफाईका लागि विशेष भूमिका निभाउन सके रोगवाट बच्न सकिने जानकारी दिए ।
नगरपालिकाले घरको नक्शा पास गर्दा अनिवार्य घरको झ्याल ढोकामा जाली हाल्नुपर्नेमा जोड दिए । चिकित्सकहरु शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बोल्दै डेंगुका बारेमा जानकारी गराएका हुन ।
काठमाडौं । मुलुकको सबैभन्दा जेठो अस्पतालका रूपमा रहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय ...
चिकित्सकको मनपरी : तोकिएभन्दा ६० प्रतिशत बढी रकम असुली
काठमाडौं । देशभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले अस्पतालपिच्छे फरक–फरक ...
‘होल बडी चेकअप’मा अस्पतालको मनपरी
काठमाडौं । सरकारी तथा निजी अस्पतालले ‘होल बडी चेकअप’को नाममा हजारौं रुपैयाँ असुल्दै आएका ...
‘हामीलाई त ग्राण्डी अस्पतालले नराम्ररी ठग्यो, अब कोही नठगियून्’
काठमाडौं । सन्तान जन्माउने योजनामा रहेका सञ्जीव न्यौपाने र एकता घिमिरेलाई यतिबेला जीवनमै ...
खुशीयालीमा केक काट्नु स्वास्थ्यका लागि कति हितकर ?
काठमाडौं(बीबीसी) । जन्मदिन होस् या वैवाहिक वार्षिकोत्सव कुनै पनि विशेष अवसरमा नेपाली शहरी ...
मानिसमा कसरी सर्छ बर्ड फ्लू ? यसरी बचाैँ
कुखरा र पन्छीमा मात्र देखिने गरेको बर्ड फ्लू नेपालमा पहिलोपटक मानिसमा पनि देखिएको छ । बर्ड ...
‘नेपालको स्वास्थ्य सेवा निजी चिकित्सकले धानेका छन्’
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले नेपालको स्वास्थ्य सेवा ...
आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवा ठप्पः चिकित्सकहरुले सामूहिक राजीनामा दिने !
काठमाडौं । समायोजन प्रतिक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सकहरु आन्दोलनमा ...
वीर अस्पतालको गेटमै बिरामीको ७२ घण्टा
काठमाडौं । सरकारको समायोजन प्रक्रियाले आफूहरूको वृद्धि विकासमा गम्भीर असर परेको भन्दै ...
दुईतिहाइको आडमा सरकार निरंकुश बन्दै गयो : सभापति देउवा
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा हवाई फायर र अश्रु ग्यास प्रहार
विरुवा रोपेर कांग्रेसले दोस्रो चरणको जागरण अभियान सुरु गर्ने
एनआरएन युकेको निर्वाचनले छुट्टै मोड लिदै
विदेशबाट आउने यात्रुका सामान विमानस्थलमै चोरी
मदिरा सेवन गरेर साथी–साथीबीच कुटाकुट, एक जनाको मृत्यु
कन्टेनर चालकलाई प्रहरीको लात्ती र मुक्का, रसुवामा जुलुस र बन्दको आब्हान
२० लाख नदिए हत्या गर्ने र घरमा बम पड्काउने धम्की